Trusty Shops|Moroccan Repair Shampooo
Moroccan Repair Shampooo
Product Code: oz0608
ဆံပင်ဆိုးခြင်း၊ ဆံပင်ကောက်ခြင်း၊ ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေသည်။
Moroccanoil Moisture Repair Shampoo (250 ml)
ဒီခေါင်းလျှော်ရည် ဟာပျက်ဆီးသွားတဲ့ ဆံကေသာကိုပြန်လည် ရှင်သန်စေပြီး ဆံပင်ဆိုးခြင်း၊ ဆံပင်ကောက်ခြင်း၊ ဆံပင်ဖြောင့်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သော ဆိုးကျိုးများကို လျော့ကျစေပြီး ပင်ကို ဆံကေသာ အတိုင်းပြန်လည်ဖြစ်စေပါတယ်။ အစိုဓာတ်ဖြည့်ပေးပြီး၊ ဆံကေသာကို အားဖြည့်ပေးတာကြောင့် ဆံပင်အသစ်ကိုလည်း ပြန်လည် ထွက်စေပြီး ဦးရေဖျားကို လည်းကျန်းမာစေပါတယ်။
ခေါင်းလျှော်ရည်ဖြင့်လျှော်ပြီးသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် Moroccanoil Mositure Repair Conditioner ကိုအသုံးပြုပေးပါက ထိရောက်မှုပိုရှိစေပါသည်။
You're reviewing: Moroccan Repair Shampooo
8+ Minute Ginseng Shampoo
Ginseng စွမ်းအားနဲ့ ဆံပင်ထူစေမယ်၊ သန်မာစေမယ်၊ အားအင်ဖြည့်ပေးမယ်၊ သန့်ရှင်းစေမယ်။
FicceCode Shampoo Shampoo ...
FicceCode Shampoo and Hai ...
The Goat Conditioner
The Goat Shampoo
သဘာဝ ဆိတ်နို့ဖြင့် အဓိက ထုတ်လုပ် ထားခြင်းကြောင့် ဆံသားကို တောက်ပြောင် နူးညံ့စေကာ ဦးရေပြားကို အေးမြသန့်စင်စေပါသည်။
Thursday Plantation Tea T ...
Tea Tree ခေါင်းလျှော်ရည် ဘောက်ထသောသူများအတွက်
Thursday Plantation Tea Tree Everyday Conditioner
Tea Tree Conditioner ဟာဆိုရင် ဦးရေဖျားကို အားဖြည့်ပေးပြီး၊ Tea Tree oil ပါဝင်တာကြောင့် ဆံကေသာကို ဝင်းပစေပြီး၊ ဆံပင်ကိုအဆီပြန်ခြင်း၊ ဦးရေဖျားတွင်ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
Biotin & Collagen (thick ...
Biotin & Collagen (thick & full +) Shampoo & Conditioner
Vitamin B7 biotin, collagen,and hydro-wheat protien များပါဝင်လို့ ဆံပင်ကို ထူစေသည်။
Mustela Hair & Body Clean ...
Mustela Hair & Body Cleansing Gel
ဆံပင်ရော ခန္ဓာကိုယ်ပါ သန့်စင်နိုင်သည်။
Ego Qv Hair Nourishing Sh ...
Ego Qv Hair Nourishing Shampoo
This nourishing shampoo rehydrates the scalp and enriches the hair with an intense moisture boost leaving it feeling soft and smooth.
SELSUN Blue Aniti- dandru ...
SELSUN Blue Aniti- dandruff Shampoo
ဘောက်များလို့၊ ခေါင်းခဏခဏ မကုတ်ချင်လို့၊ ယားနေလို့ဘဲဖြစ်ဖြစ် ဒီပြသနာတွေကို တိုက်ခိုက် ဖြေရှင်းပေးပါသည်။
Choose200 ml(Deep Cleansing Purple)200 ml(Replenishing Blue)
Redwin Coal Tar Shampoo
ဘောက်ထခြင်းနှင့် ဦးရေပြား ယားယံခြင်းတို့အတွက်
Moroccan Extra Volume Sha ...
Moroccan Extra Volume Shampoo
Moroccanoil မှ ဆံပင်ပါးသူများအတွက် Extra Volume shampoo & conditioner 500ml set
Moroccan Hydrating Shampo ...
Moroccan Hydrating Shampoo
ဦးရေဖျားခြောက်သွေ့ခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ပေးပြီး ဆံကေသာကိုလည်းတောက်ပစေပါသည်
Moroccan Smoothing Shampo ...
Moroccan Smoothing Shampoo
Smoothing Shampoo ဟာဆံပင်ဖွာသောသှုများ၊ ဆံပင်ရှုပ်သောသူများအတွက်ပိုကောင်းပါသည်
Jinda herbal Hair care Se ...